ကောင်မလေးလာခါနီးပြီ၊။ ကျော်နိုင် လက်ကနာ၇ီကိုကြည့်ပြီး အချက်ပြတယ်။ ကျွှန်တော်နှင့်ကုလား READY ပဲဆိုတဲ့သဘော ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်၊ ဟော.. ဟိုဘက်လမ်းကြားထဲကနေ ကောင်မလေး လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ. လှမ်းလာနြေ့ပီ။ လွယ်အိတ်လေး ကိုလွယ်ပြီး ထမင်းချိုင့်လေးဆွဲလာတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ကျော်နိုင့်ကို မြင်တော့ တစ်ချက်တုံ့.ကနဲဇြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ဂ၇ုစိုက်စ၇ာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် မျက်မှောင်လေးကြုံ.ပြီး ခပ်တင်းတင်းဆက်လျှောက်လာတယ်။ သူ ခြေလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်းမှာ ပေါင်တံ လုံးလုံးလေးဟာ ဆင်စွယ်နှာမောင်းလေးလို ဝင်းကနဲ တင်းတင်းလေး ပေါ်ပေါ်လာတယ်၊တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်နှာပေါ်ဝဲကျလာတဲံ့ ဆံနွယ်လေးကို မေးလေးဆတ်ြ့ပီး ခါထုတ်လိုက် ၇င် ပေါင်ကြားထဲက ငပဲ ဆတ်ကနဲ မတ်လာအောင် ဆွဲငင်အား ကောင်းလှပါတယ်။ ကျော်နိုင်လဲဒါတွေ စွဲပြီး ကောင်မလေးကိုလိုက်တာလေ။ ကောင်မလေးက ကိုးတန်းကျောင်းသူ မနက် ၇ နာ၇ီလောက်ဆို ဒီလ
မ်းကြားလေးအတိုင်း ကျူ၇ှင်သွားလေ့၇ှိတယ်။ကျော်နိုင်က စောင့်ြ့ပီးရည်းစားစကားပြောတယ်။ ကောင်မလေး က ပြောရပါ့ မလားဆိုပြီး ၇ပ်ကွက်လူကြီးသွားတိုင်တော့ ကျော်နိုင် သတိပေးခံရတယ်၊ မိဘတွေကချမ်းသာတော့ မျက်နှာနာပြီး သတိပေးရုံလောက်နှင့်ပြီးတာပါ။ ဒါကိုကျော်နိုင်က မကျေနပ်လို. လက်စားချေမယ်ဆိုပြီး ကျွှန်တော်တို.နှစ်ယောက်နှင့် စောင့်တာပေါ့။ ကျွှန်တော်တို.က ကျော်နိုင့် သူငယ်ချင်းတွေပါ၊ တပည့်လို.ပြော၇င်လဲ မမှားဘူး။သူပေးတာယူ၊ သူကျွှေးတာစား။ သူတိုက်တာသောက်မိမှတော့ သူခိုင်းတာလုပ်၇တော့မှာပေါ့။ ကောင်မလေး ကားနားေ၇ာက်လာတာနှင့် ကျွှန်တော်နှင့်ကုလား တစ်ပြိုင်တည်း ကောင်မလေးကို ဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ကျွှန်တော်က ဂျိုင်းကနေမ၊ ကုလားကခြေထောက်ကနေ မပြီး ကျော်နိုင် အသင့်ဖွင့်ပေးတဲ့ကားထဲ ကိုထိုးသွင်းလိုက်ကြတယ်၊ကောင်မလေး ဟာ၇ုတ်တ၇က်တော့ အ၇မ်းလန့်ပြီးမျက်လုံးလေးအဝိုင်းသား နဲ.ကြောင်နေတယ်၊ ကားထဲေ၇ာက်တော့မှ သူအသိပြန်ဝင် လာပြီး အတင်းရုန်းကန်၇င်း အော်ဟစ်ဖို.ကြိုးစားတယ်။ မ၇တော့ပါဘူး၊။သူ.နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ ကျွှန်တော့်လက်ဝါးထဲမှာ ဘယ်လိုမှ လှုပ်၇ှားလို. မ၇တော့ပါဘူး။ ကောင်မလေးဟာ မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ် နှင့် ကျွှန်တောင်္တို.ကို ကြောက်လန်.တကြားကြည့်တယ်။ သူ.မျက်နှာလှလှလေး ဟာကျွှန်တော့်လက်ဝါးထဲမှာ သေးသေး လေး။ဒီအချီန်မှာ ပဲကျော်နိုင့် ကအသင့်ယူလာတဲ့ ဆေးထိုးအပ်ကို ကိုင်ပြီး အနားေ၇ာက်လာတယ်၊
ဆေးထိုးအပ်ထဲမှာတော့ အများထင်သလို ကလို၇ိုဖောင်းတွေ၊စီတ်ကြွဆေးတွေ မပါပါဘူး၊ B E အဆီ၇ယ်၊ vat 69 ၇ယ်၊ GRAND ROYAL WHISKY ၇ယ်ကိုေ၇ာမွှေပြီး ဆေးထိုးအပ်စလင်း ထဲထည့်ထားတာပါ။ ဒါကလဲ ကျော်နိုင်၇ဲ. အကြံ။ဟိုဆေးတွေ ဘယ်မှာဝယ်၇မှန်း မသိတော့ ကောင်မလေးကို မြို.ပြင်ခြံ အသယ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ဖြစ်အောင်လို.လေ၊ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ 10 CC စလင်းထဲက အ၇က်တွေ အကုန်မှာတော့ သူ.မျက်ဝန်းလေး ရီဝေဝေ ဇြစ်လာပါပြီ၊။ကျွှန်တော်တို.ကပို သေချာသွားအောင် ၅ မိနစ်လောက် စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ နောက် သူ.ကို ချူပ်ထားတာကိုလွှတ်ကြည့်တယ်။ အူ၇ိုင်းကောင်မလေး ဟာမူးနေပါပြီ။ သူခေါင်းထောင်နိုင်ဖို.ကြိုးစားတယ်၊ မ၇ပါဘူး။ဘယ်၇နိုင်မလဲ ..နေ.တိုင်းသောက်နေကျ ကျွှန်တော်တို.တောင် ကိုယ့်ဟာကို စမ်းထိုးကြည့်တုန်းက ချာလပတ်လည်နေတာ။ ဒီလို ကောင်မလေး ကတော့ ကမ္ဘာကြီး ချာချာလည် ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကျော်နိုင်ကို OK တဲ့အကြောင်း လှမ်းပြောလိုက်တော့ ကျော်နိုင် ကသွေးစုပ်ခါနီး VAMPIRE တစ်ကောင်၇ဲ. အသံမျိုးနဲ. အားရပါး၇ ၇ယ်ပြီး ကားလေးကို မောင်း ထွက်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျော်နိုင်တို. ခြံက ၇ာဘာ ခြံပါ၊ ၅ ဧက လောက်ကျယ်တဲ့ ခြံကြီးထဲမှာ ကျော်နိုင့်မိဘတွေ တခါတလေ အပန်းဖြေဖို. ဆောက်ထားတဲ့ ဘန်၈လို တစ်လုံး ၇ှိတယ်။ ကြိုက်သလောက်အော်၊ ကြိုက်သလိုဟစ် ၇ွာထဲက သဲ့သဲ့လေးလောက်ပဲကြား၇တာ။ ၇ှိတဲ့အစောင့်ဆိုတာလဲ ကျော်နိုင်တို့ကမီးသေပြီးသား။ အခုလဲ ကား၇ပ်လိုက်တာနဲ. အပြေးလေးေ၇ာက်လာပြီး ကျော်နိုင့်ကို အားရဝမ်းသာပြုံးပြတယ်။ ကျော်နိုင်က အိတ်ထဲက ထောင်တန်နှစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်၊ အစောင့်ခမျာ အပျော်လွန် သွားလို.ထင်တယ်။ ချာကနဲလှည့်ထွက်ပြီးမှ ဆ၇ာဘာဝယ်ပေးရဦးမလဲတဲ့။ ကျော်နိုင်က မလိုတော့ဘူး။ကားပေါ်မှာ အကုန်ပါတယ်ဆိုတော့မှ။ခြေလှမ်းသွက်သွက်နှင့် အပြေးတစ်ပိုင်းလစ်ပါတော့တယ်။ သူပျောက်သွားတော့မှ ကောင်မလေးကို ပွေ.ချီပြီး အိပ်ခန်း ထဲသယ်ရတယ်၊ ဒီတစ်ခါတော့ ကျော်နိုင်က သူကိုယ်တိုင် သယ်ပါတယ်။ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်လေ။ ဒီေ၇ာက်မှတော့ ကျွှန်တော်တို.ဘာဝင်ပါစ၇ာ၇ှိတော့မှာလဲ။ ဒါနဲ. နောက်ဖုံးထဲက အရက်ပုလင်းတွေ၊ေ၇ခဲ ပုံးတွေ ထုတ်ပြီ်းကုလားနဲ.ကျွှန်တော် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဝိုင်းဖွဲ.လိုက်ကြတယ်။
တစ်ကြိုက်လောက်ပဲ သောက်၇ပါသေးတယ်။ကျော်နိုင်ေ၇ာက်လာတယ်။ “ဟ...ဇာတ်လမ်းမစသေးဘူးလားဟ” “စော်ကအမူး မပြေသေးဘူးကွ။ မူးနေရင်ကောင်းမှန်းသိမှာ မဟူတ်ဘူး။ သူအမူးပြေအောင်စောင့်၇င်း သွေးပူပေါ့ ၊လာ CHEERS” ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ကျော်နိုင် ကဖန်ခွက်ခြင်းတိုက်ပြီးမော့လိုက်တော့ ကျွှန်တော်တို့လဲ လိုက်မော့ရတာပေါ့။ တစ်ခွက်လောက်သောက်ပြီးတော့ ကုလားက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ.အကိုဆီဖုန်းဆက်ချင်လို. ဆိုကျော်နှိုင့်ဖုန်းကို နှစ်၇က်လောက် ငှားပါလို.ပြောတယ်။ ဒါမျိုှးဆို ကျော်နိုင်တို.က လက်တိုတာမဟုတ်ဘူး။ ယူစေဗျား ဆိုပြီး သူ့ဟန်းဖုန်းကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်။ နောက်တစ်ခွက်လောက် အကုန်မှာတော့ ကျော်နိုင် က ကဲ..စမယ် ဆိုပြီး အခန်း ထဲဝင်ပြီး တံခါး ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွှန်တော်တို.ကလဲ ဘယ်နေမလဲ၊ ခွက်လေးတွေ အသာချပြီး ချောင်းကြတာပေါ့။ ကျွှန်တော်တို.ချောင်း တဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးဟာ ကိုယ်တုံးလုံးလေး ဖြစ်နေပါပြီ။
ဖြူဝင်းတယ်ဆိုတာထက်ေ၇ွှဝါေ၇ာင် ခန္ဒာကိုယ်လေး ဟာအခုတော့ ဖုံးကွယ်စ၇ာ အဝတ်တွေမ၇ှိလို. ဟာလာဟင်းလင်းလေးဖြစ်နေပါပြီ။ သူ.မျက်နှာလေးဟာ ဘေး တစ်စောင်းလေး ဖြစ်နေလို. မျက်နှာလးကိုတော့ မမြင်၇ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျော့၇ှင်းတဲ့ လည်တိုင်လေး၇ယ်။တောင်ပူစာလေးလို မို.မို.ဝန်းဝန်း ၇င်သားလေးနှစ်မွှာ၇ယ် ၊ အဆီပြင် မ၇ှိတဲ့ ဗိုက်သား ချပ်ချပ်လေး၇ယ်။ အမွှေးေ၇းေ၇း လေးပေါက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေး ၇ယ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းမြင်နေ၇ပါတယ်။
လှုပ်လို.မ၇မှန်းသိသွားတဲ့ကောင်မလေးဟာ “ အင်....လွှတ်၊ လွှတ် ၊၇ှင်မယုတ်မာနှင့်နော်။” ပြောပြောဆိုဆို သူ.လက်သည်းချွှန်ချွှန်လေးတွေနှင့် ကျော်နိုင့် မျက်နှာကြီးကို ကုပ်ဖဲ့ဖို.ကြိုးစားတယ်။ ကျော်နိုင်က “ဟင်” ကနဲ တစ်ချက်မာန်ဖီသလိုေ၇၇ွတ်လိုက်၇င်း ကောင်မလေး လက်နှစ်ဖက်ကို သူ.လက်တစ်ဖက်နဲ. ဖမ်းချူပ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ကောင်မလေးမျက်နှာလေး ကိုညာလက်နဲ. ဖမ်းကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို အတင်းစုပ်ပါတော့တယ်။ ကောင်မလေးက မျက်နှာလေးကို ၇ှုံမဲ့ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တင်းတင်း စေ့ထားတော့ ကျော်နိုင့်မှာ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုစုပ်ဖို. မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျော်နိုင်ကလဲ သမ္ဘာပဲ...ညာဘက်လက်ကြီးနဲ. ဘယ်ဘက် နို့သီးလေးကို ခပ်တင်းတင်း တစ်ချက်ဆုပ် ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်။
ကျော်နိုင် ကပြုံးလိုက်တယ်။ နောက် လွှတ်ပေးမလိုလို နဲ.လက်ကို ၇ုတ်လိုက်ပြီးမှ နို.သီးခေါင်းလေးကို လိမ်ဆွဲ ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ ကျော်နိုင်လက် ၇ုတ်လိုက်တော့ နာကျင်တာသက်သာသွားပုံ နဲ့. ကျုံ.ထားမိတဲ့ ပခုံးလေးကို ပြန်ဖြေချ၇ုံ၇ှိသေး ကျော်နိုင်က နို.သီးခေါင်းလေးကို လိမ်ဆွဲလိုက်တော့ “ အ...အားးး” ဆို အသံစူးစူးလေးနဲ. တစ်ချက်အော်လိုက်ပြီး မှ သူ.နို.သီးလေးကို ပွတ်၇င်းတဟင့်ဟင့် နဲ. ငိုပါတော့တယ်။
လီးကြီးကို သေချာကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အဝလေးမှာ တေ့လိုက်ပြန်တယ်။ ပြီးတော့ သာသာလေးထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ဟာ ဒီတစ်ခါတော့ ၇ုန်းလဲမ၇ုန်းတော့၊ လက်နဲ.လဲမကာတော့ဘူး။ဒါပေမယ့် “အီ...”ဆိုပြီး ကြောက်ကြောက်နှင့် သူ.ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို အတင်းတောင့်ထားတယ်။
ဒီတော့ကျော်နိုင့်မှာ လီးကိုေ၇ှ့တိုးပြီး ထိုးလိုက်၇င် သူ.ခါးကပါေ၇ှ့ေ၇ာက်သွားတော့ ကြောက်ကြောက်နှင့် အတင်းတောင့်ထားတဲ့ ကောင်မလေးပေါင်နှစ်ချောင်း ကိုဖိမိပြီး ကောင်မလေးခန္ဒာကိုယ်လေးက ခေါင်း၇င်းကိုေ၇ွ.သွားတယ်။ တစ်ခါ ကျော်နိုင်ကမဝင်သေးတော့ေ၇ှ့တိုးပြီး ထည့်လိုက်ပြန်၇င်း ကောင်မလေးကိုယ်လုံးလေးကေ၇ွ.သွားပြန်၇င်း နဲ.နောက်ဆုံးကောင်မလေးဟာ ခုတင်ခေါင်း၇င်းကို ခေါင်းနဲ. တိုက်၇ုံတင်မကတော့ပဲ အပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟာ ခုတင်ခေါင်း၇င်းမှာ ကန်.လန်.ကြီး ၊ကျော်နိုင်က အောက်ကိုပဲ မဲနေတော့ ကောင်မ လေး ကန်.လန်.ကြီးဖြစ်နေတာချက်ချင်းသတိမထားမိဘူး။
ခဏနေ နဖူးပေါ် စီးကျလာတဲ့ချွေးတွေကို သုတ်၇င်းကြည့်လိုက်တော့မှ ကောင်မလေး ကန်.လန်.ကြီးဖြစ်နေတာကိုမြင်သွားပြီး ကောင်မလေးခါးကို ဇုံကိုင်ကာ အောက်ကိုပြန်ဆွဲချတယ်။ကိုယ်လုံးလေးဟာ အ၇ုပ်လေးတစ်၇ုပ်လိုေ၇ွ.ကနဲ ပါသွားတယ်။ ဘယ်လောက်ကြောက်နေတယ်မသိဘူး။ သူ.ခြေထောက်လေးတွေကို အတင်းအားထည့်ပြီး တောင့်ထားတာ ခြေမလေးတွေတောင် ကုပ်လို.။ကျော်နိုင်လဲ ဒါကိုမြင်တယ်။ဒါပေမယ့် သူလဲမပြုံးနိုင်တော့ဘူး။သူ.တစ်ကိုယ်လုံးေ၇ချိုးထားသလို ချွေးတွေနစ်နေပြီလေ။
မောလဲမောနေပုံ၇တယ်။ သူ.အသက်၇ှုသံဟာ အပြင်ကတောင်ကြား၇တယ်။ကျော်နိုင်ဟာ မွေ.၇ာပေါ်ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ခဏအမောဖြေနေတယ်။ အမောဖြေနေတုန်း သူ.လီးက ပျော.ကျသွားတယ်။သူလဲသိတယ်။ သူဟာ ကောင်မလေးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းတွန်းဖယ်ပြီး အခန်းတံခါးဝနားကိုလျှောက်လာတယ်။ ကျွှန်တော်တို.လဲ ကမန်းကတန်း ဧည့်ခန်းကို ပြန်ပြေးပြီး အ၇က်သောက်ချင်ယောင်ဆောင်နေ၇တယ်။
ကောင်မလေးဟာ ခုနက ခံထား၇တာတွေ ကြောင့်ထင်တယ်။ ၇ုန်းလဲ မ၇ုန်းတော့၊ လက်နဲ.လဲ မကာတော့ဘူး။ နောက်ပြီး ပေါင်တံ လေးနှစ်ချောင်းကလဲ ကျော်နိုင် ဆွဲဖြဲ ထားလို. တော်တော်ဟ နေတော့ ကျော်နိုင့် ခါးကို ထောက်မနေဘူး။ ကျော်နိုင့် လီးကြီးဟာ စောက်ဖုတ်အဝလေးကို သွားထိတယ်။ ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်သွားတယ်။
နောက် ကျော်နိုင်က ဖိထည့်လိုက်တယ်။ အ၇ည်လေးတွေ ခန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ် အပြင်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို လီးကြီးဟာ ထိုးခွဲပြီး အထဲ ဝင်မလိုလို နဲ. အောက်ကို ချောပြီး ကျသွားတယ်။ မွေ.ယာကိုတောင်သွားထောက်မိတယ်။ ကျော်နိုင်က နောက်တစ်ကြိမ် အောက်ကနေ ပင့်ပြီး ထည့်လိုက်ပြန်တယ်။ လီးဒစ်ကြီးဟာ စောက်ဖုတ် အပေါ် နှုတ်ခမ်းလေး လေးတွေကို ပွတ်ဆွဲသွားပြီး စောက်စေ့လေးကို ခလုတ်တိုက်၇င်း၇ပ်သွားတယ်။
စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ကြုံ.ပြီး ချိုင့်ခွက်လာတယ်။ ဒစ်အဖျားပိုင်း ထိပ်ဖူးလေး ဝင်နေပြီ။ ကောင်မလေး အံလေးကြိတ်ပြီး ကျော်နိုင့် လက်မောင်းကြီးကို အတင်းဆုပ်ညှစ်ထားတယ်။ သူ.ခမျာကြောက်လဲကြောက်၊ နာလဲနာနဲ့လုပ်မိလုပ်၇ာ အတင်းဆုပ်ညှစ်မိတာဖြစ်မယ်။ လက်သည်းချွှန်ချွှန်လေးတွေတောင် ကျော်နိုင့် အသားထဲစိုက်လို. ။ သွေးစလေးတွေတောင်စို.ထွက်လာတယ်။
နောက် နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန်ထွက်လာတယ်။ သူ.လက်ထဲမှာ ဆီပုလင်းကြီး ကိုင်လို.။ နောက် ကုတင်ဘေးမှာ၇ပ် ဆီ ပုလင်း အဖုံးဖွင့်ပြီး ဆီေ၇တွေ သူ.လီးပေါ် လောင်းချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဂွင်းတိုက်သလို နှစ်ချက် သုံးချက် ဆွဲလိုက်သေးတယ်။
သူ.လီးကြီး ဟာ ဆီေ၇တွေနှင့် ပြောင်လက်ပြီး အကြောကြီးတွေတောင် ပိုထောင်လာသလိုပဲ။ နောက် ကောင်မလေး ပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်ပြန်တယ်။ လီးကြီးကို သေချာကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အဝလေးကို တေ့လိုက်တယ်။ လီးတစ်လျှောက် စီးကျလာတဲ့ ဆီေ၇ တွေဟာ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ်လေးပေါ်ကို တစိမ့်စိမ့် စီးကျလာ တာ စောက်ဖုတ်လေးတောင် ပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးဖြစ်လာတယ်။
ခဏလောက် တ၇ှီး၇ှီးနဲ့. ဇိမ်ခံနေပြီးမှေ၇ှ.ကို ဆက်ဖိသွင်းလိုက်ပြန်တယ်။ စောက်ဖုတ်အပြင်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ အထဲကို လိပ်ဝင်သွားတယ်။ လီးကြီးက တေ၇ွ.ေ၇ွ.နဲ. တိုးဝင်သွားတယ်။ ကောင်မလေး မျက်နှာလေး၇ှုံမဲ့ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်လုမတတ်ကိုက်ထားတယ်။
တေ၇ွ.ေ၇ွ.ဝင်သွားတဲ့ လီးကြီးဟာ သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်အေ၇ာက်မှာေ၇ှ့ဆက်မတိုးတော့ဘူး။ အထဲကတခုခု နှင့် ခံနေသလို လို၊ ဘာလဲဆိုတာ ကျော်နိုင် သဘောပေါက်ပုံ၇တယ်။ ခါးကို ကစား၇င်း ဝင်သလောက်လေး နှစ်ချက်သုံးချက် လောက် ကပ်ပြီးညှောင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖင်ကြီးမပြီးအားယူ၇င်း ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။
လီးကြီးဟာ "ပလွတ်၊ ဖောက် "ဆို လေးပုံ သုံးပုံလောက်ဝင်သွားတယ်။ ကောင်မလေး "အဟ..အ..အား.."ကနဲ အော်တယ်။ နောက် ကျော်နိုင့် ၇င်ဘတ်ကြီးကို ဘုန်းဘုန်းထု၇င်း တဟီးဟီး နဲ.ငိုပါတော့တယ်။ ကျော်နိုင် က ကောင်မလေးထု၇ိုက်နေသမျှကို မနာသလိုပဲ လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်လေးထဲ စိုက်ထား၇င်း ငြိမ်ခံနေတယ်။
ခဏ ငြိမ်နေပြီးတော့ ကျော်နိုင် ခါးလေးကို နဲနဲ လှုပ်ပေးတယ်။လီး ကြီးကစောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ဖိမိပြီး စောက်ဖုတ်အဝဟသွားတဲ့ နေ၇ာလေး တွေကနေ သွေးစလေးတွေထပ်ထွက်လာတယ်။ နောက်ခါးလေးကိုလှုပ်ပြီးအသာလေးကပ်ညှောင့်တယ်။ လီးကြီးက အထဲလဲ မဝင်ဘူး။အပြင်လဲမထွက်ဘူး။ တန်းလန်းကြီး။ ကျော်နိုင်ကလဲ ဇွတ်ဆက်မသွင်းပါဘူး။
စောက်၇ည်ကြည်လေးတွေ နှင့်ဆိုတော့ စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့။ အဲဒီ လို မှန်မှန်လေး လုပ်နေတုန်း တစ်ချက်ဗြုန်းဆို ကျော်နိုင် က အပြင်မှာကျန်နေတဲ့ လီးအ၇င်းပိုင်း အဆုံးထိေ၇ာက်အောင် ဆောင့်ချလိုက်တယ်။ "အ ..အွ....."ကနဲ အော်၇င်း ကောင်မလေး သူ. ဗိုက်သားချပ်ချပ် လေးကိုပွတ်တယ်။
နောက် တစ်ချက်။ နောက် တစ်ချက်။နောက် တစ်ချက်...ကျော်နိုင် ဟာ မ၇ပ်မနားလို. ပြော၇လောက်အောင် ကို အတင်းနင်းပြီး ဆောင့် တော့တာ။ ကောင်မလေး ကိုယ်လုံးလေး ဟာ တသိမ့်သိမ့် ၇မ်းခါနေတယ်။ နို.အုံလေးနှစ်လုံးဆိုေ၇ထည့်ထားတဲ့ ပူစီဖောင်း လေးလို လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်လေးပေါ့။
လက်လေးနှစ်ဖက်ကတော့ မွေ.ယာပေါ်ထောက်ထားတဲ့ ကျော်နိုင့် ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကို ထိတယ်ဆို၇ုံလေး ကိုင်ထားတယ်။ ပေါင်လုံးလေး နှစ်လုံးက ၇ိုး၇ိုး ကားထား၇ုံ မဟုတ်တော့ပဲ ဒူးလေးထောင်ပြီး ကျော်နိုင့် ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ လှုပ်နေတယ်။အင်း သူ လဲ သက်သာသလို နေတတ်သွားပြီထင်တယ်။
ကျော်နိုင် ဟာမှောက်ပြီးလုပ်၇တာ ညောင်းလို.ထင်တယ်။ မွေ.ယာပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ်။ နောက် ကောင်မလေး ပေါင်တံ လေးနှစ်ချောင်း ကို သူ.ဘယ်ဘက် ပခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်တယ်။ အဲ..ပေါင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ခြေသလုံးလေး တွေပေါ့။ ပေါင်လုံးကြီးကြီးတွေ ကိုတော့ သူက လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပိုက်ထားတယ်။
ပြီးတော့ အား၇ပါး၇ကြီးကို ဆောင့်ပါတော့တယ်။ ကောင်မလေး မျက်နှာလေးနှင့် ဒူး ဟာ တစ်ချက်တစ်ချက် ထိသွားလောက်အောင် ကွေးကွေးလေး ဖြစ်နေတယ်။ ကျော်နိုင့် တစ်ကိုယ်လုံး ကို ကောင်မလေး၇ဲ့ ခါး သိမ်သိမ်လေးနှင့် ခံထား၇သလို ဖြစ်နေတော့ ကောင်မလေး ခါး လဲ နာပုံ၇တယ်။
နောက်ပြီး ဗိုက် ကိုချပ်ပြီး ကွေးထား၇တော့ သားအိမ်လမ်းကြောင်းများ တိုသွားသလားမသိ။ မွေ.ယာ ကို လက်လေးနှစ်ဖက်နှင့် ထုထုပြီး ကျော်နိုင် တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း
"အ ..အဟ...အ...အွန်." ကနဲဖြစ်နေပါတယ်။ ကျောနိုင်ကတော့ နည်းနည်းမှ ညှာတာမယ့် သဘောမ၇ှိဘူး။
Posted by ချစ်လူမိုက် at 3:31 AM
01115074741 January 11, 2012 at 12:55 AM
စာသာတွေကကောင်းပါတယ် ဆက်ရေပါအုံ အာပေပါတယ်
jameslin thoot July 27, 2013 at 4:16 AM
Battlecal March 10, 2014 at 12:35 PM
tawtarlay June 14, 2015 at 1:19 PM
Maung Maung September 1, 2015 at 10:18 AM
d star May 6, 2016 at 9:38 AM
Thu Rein July 20, 2016 at 12:07 PM
mrs.r July 22, 2016 at 9:07 AM
မိုးယုစံ ကြောင်မလေးတကောင်မွေးထားပြီး စောက်ဖုတ်ထဲနို့ဆီထည့်ကာ ယက်ခိုင်းပါတော့သည်။ကောင်းချက်ကတော့ ဆွေမျိုးမေ့ မတတ်ပင်....နို့ ကြီးတွေ ကလည်းတရုတ်ထမင်းပန်းကန်လုံးလောက်ရှိတာ တင်းရင်းနေတာပဲ.